Tallaabo Ruushku sheegay inuu ka qaadayo Mareykanka oo cabsi xooggan abuurtay - Caasimada Online
Home Dunida Tallaabo Ruushku sheegay inuu ka qaadayo Mareykanka oo cabsi xooggan abuurtay
Moscow (Caasimada Online) – Russia ayaa Khamiista maanta ah uga digtay Mareykanka inay Moscow ay halka uu mudan yahay dhigi doonto dalka ah quwadda koowaad ee adduunka, ayada oo ku eedeysay Reer Galbeedka inay abuurayaan shirqool Ruushiyaan naceyb oo lagu kala dhantaalayo Ruushka.
Hanjabaadda cusub ee Ruushka ayaa waxaa ka horreeyey ayada oo shalay madaxweynaha Mareykanka uu “dambiile dagaal” ugu yeeray madaxweyne Putin.
Erayadii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku qeexay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ahaa “dambiile dagaal” sababo la xiriira howlgalka militari ee Ukraine waa “mid aan la aqbali karin lana cafin doonin,” waxaa sidaas sheegay Kremlin-ka.
Biden ayaa Putin ku calaameeyey “dambiile dagaal” Arbacadii kadib markii uu daawaday muuqaallo argagax leh oo laga soo duubay duulaanka Ukraine.
Waxa ay aheyd markii ugu horreysay ee Biden uu weedhaas ku calaameyo Putin, waxaana madaxweynaha Mareykanka uu sii kordhiyey weerarkiisa isaga oo twitter-ka soo dhigay in Putin “uu argagax iyo burbur ka wado Ukraine isaga oo duqeynaya dhismooyin shacab iyo isbitaallada ay haweenku ku umulaan.”
Kremlin-ka ayaa jawaab caro leh ka bixiyey ereyada madaxweynaha Mareykanka.
“Waxaan aaminsannahay in oraahda noocaas ah ay tahay mid aan la aqbali karin oo aan la cafin karin oo ka timid madaxweyne dal, oo bambooyinkiisa ay dileen boqolaal kun oo qof oo dunida dacalladeeda ku kala sugan,” waxaa sidaas yiri afhayeenka Putin Dmitry Peskov.
Caalamka ayaa hadda indho cabsi leh ku eegaya xiisadda kasii dareysa ee labada dal ee ugu quwadda weyn caalamka, ayada oo laga cabsi qabo inuu dagaal toos ah ka dhex qarxi karo.